Olona luhlu lubalaseleyo lusekwe kwiincwadi ongenakuphoswa | Uncwadi lwangoku
Kwiminyaka yakutshanje, umabonwakude uye waba yindawo enamandla ngakumbi yokwenza amabali, ukunyusa uhlahlo-lwabiwo mali kunye nokumema abantu abadumileyo. Ngapha koko, uncwadi lube bubutyebi obukhulu kwezinye iinkampani zemveliso ezibonayo kutshanje ba thengisi ezona zinto zilungileyo zokutsala inyambalala yababhalisi abatsha. Ungaphoswa zizo uthotho olusekwe kwiincwadi ukuba awukababoni.
1 Ibali lesicakakazi
2 Amanxeba avulekileyo
3 Ubuxoki obukhulu obukhulu
4 Umdlalo wetrone
6 Ngenxa yezizathu ezili-13
Emva kokubona Ixesha lokuqala leTalema's Handmaid's Tale Ngo-2017, sonke sazi ukuba siza kufumana into enkulu. Ngobushushu be #MeToo kunye noDonald Trump, ibali likaJuni, umhleli ochumileyo wajika waba likhoboka lezesondo u-DeFred ovela kurhulumente wobuzwilakhe waseGuilead, akasiso kuphela isithuthi esibalulekileyo sokuzonwabisa ngeemvakwemini zempelaveki, kodwa nakwisilumkiso, esisilumkiso into enokwenzeka nangaliphi na ixesha kwihlabathi elinobunzima ngakumbi kunokuba sicinga. Nangona kunjalo, simele ukuhlawula konke UMargaret Atwood, Umbhali waseCanada owayesele ngo-1985 wayephambi kwento eyayinokwenzeka emva kokupapasha incwadi egubungela ixesha lokuqala lolu ngcelele, eyesibini kutsha nje yakhupha imithombo kamabonakude emsulwa njengale inika umdla.
Emva kwenkulumbuso ekuqaleni kukaJulayi ophelileyo, iingcali ezininzi sele zingxamile ukuya kuqinisekisa amanxeba avulekileyo njenge uthotho lwehlobo. Ngokusekwe kwi- ethengwa NguGillian Flynn, umbhali weLost Lost, eyaziwa ngokuba zii-Sharp Objects icacisa uCamille Preaker (omkhulu UAmy Adams), Intatheli enengxaki yotywala ekufuneka abuyele kwidolophu yakhe, iWind Gap, ukuyogubungela ukubulawa kwabafana ababini. Umoya oya unganyamezeleki ngakumbi xa umlinganiswa ophambili kufuneka abuyele kuhlala nomama wakhe ongqongqo, u-Adora, kunye nodadewabo ogama lingu-Amma angamaziyo.
Lee Amanxeba avulekileyo ngaphambi kokubukela uthotho lwehlobo.
Umlawuli ofanayo waManxeba aVulekileyo, UJean-Marc Vallée, wayejongene nokutshabalalisa kunyaka ophelileyo nomnye uthotho lwabasetyhini olusuka kuncwadi, ngokukodwa Incwadana kaLiane Moriarty enegama elifanayo. Ukusekwa kwindawo yokuhlala eMantla California, Amanga Amakhulu aMkhulu aMatyala amaninzi kubadlali abaphambili: UNicole Kidman, uReese Whiterspoon, uLaura Dern, uShailene Woodley okanye uZoë Kravitz, amagcisa abalinganiswa babo bajongana nemicimbi eyahlukeneyo yemihla ngemihla phakathi kwekhefu lesikolo kunye neefesi zakusasa ezinobunzima beedrama zabo. I-ode kubufazi oboyise uluntu kwi-2017 kwaye ixesha labo lesibini eliza kufika kwi-HBO kwi-2019.
Nangona ngoku uninzi lweplanethi luyazi uthotho lweenkwenkwezi lweshumi leminyaka, ayikaze ibabuhlungu ukukhumbula imvelaphi ye-HBO epic enexesha lokugqibela eliza kungena entwasahlobo ka-2019. Ukulinda ixesha elide ukuba uninzi lwenu lunciphise ngokukhangela kumaphepha esagaIngoma yomkhenkce nomliloiqalwe nguGeorge RR Martin kwaye iyelenqe kabani, ngaphandle kokuba nesakhiwo esibalisayo esahlukileyo kolu luthotho, iba yeyona ndlela ibalaseleyo yokukhumbula abanye babalinganiswa abaphambili neemeko ezijike iPoniente yaba lelona dabi likhulu likamabonakude eUnited States.
Emva kwenkulumbuso yayo eyaphumelela ngo-2014, iLos 100 isendleleni yokusasaza ixesha lesithandathu elithembisa ukusombulula uninzi lweemfihlakalo eziphakanyiswe kwiminyaka yakutshanje. Ngokusekwe kwi- incwadi engaziwayo nguKass Morgan, Isixhenxe luchungechunge lubekwe kwiminyaka elikhulu emva koko ukutshatyalaliswa komhlaba ngenxa yemfazwe yenyukliya. Imeko enyanzela abo basindileyo kwintlekele ukuba bahlale e-L'Arche, inqanawa edibanisa abanye abaninzi kodwa, emva kokunikezela kubuninzi babantu, ithathe isigqibo sokuthumela izaphuli-mthetho ezilikhulu eMhlabeni ukuze zifumanise ukuba kuyahlalwa kwakhona. Ingxaki iza xa abalinganiswa abaphambili babalekela kwiplanethi entsha egcwele ubungozi kunye nezinto ezimangalisayo.
Ngenxa yezizathu ezili-13
El ukuxhatshazwa uye waba ngomnye wemixholo ephindaphindayo kwifilimu nakumabonwakude kwaye Ngenxa yezizathu ezili-13 iye yaba yeyona mphumezi inkulu yesikhalazo. Ngokusekwe kwinoveli kaJay Asher epapashwe ngo-2007, Uthotho lweNetflix lube yimpumelelo emva kokuqala kwayo kunyaka ophelileyo, nangona uninzi lubize indawo yokuba "iyingozi". Ibali likaHannah Baker, okwishumi elivisayo odibanisa iimeko ezahlukeneyo ezimkhokelela ekubeni anike ubungqina ngokuzibulala kwakhe ngeetheyiphu ezili-13 zekhasethi zothusa wonke umntu kwaye zavelisa ixesha lesibini elikhutshwe kulo nyaka ukwamkelwa kwalo kushushu kunangaphambili.
Ngokusekwe kwinoveli ka-Diana Gabaldon ka-1991 eyayidibene neencwadi ezisibhozo ipapashwe ngakumbi ngumbhali, Umqhubi Kuye kwaba kukufumanisa okuncinci kubathandi bescreen esincinci kunye nokuhamba kwexesha. Ikhutshwe ngo-2014, uthotho lubalisa ibali likaClaire Beauchamp, umongikazi weMfazwe yesibini yeHlabathi othuthwayo esuka eNgilane ngo-1945 esiya eScotland ngo-1743, apho athe wathandana nejoni leHighland uJamie Fraser phakathi kwiminyaka yoo-XNUMX. . Ndifuna ukwazi uhambo ngembali yaseYurophu esendleleni eya kwixesha lesine eliza kufika kulo nyaka.
USherlock Holmes, umcuphi owaziwayo ovela kwisitalato iBaker Ukubandakanyeka kumayelenqe ahlukeneyo e-Victorian yaseLondon yayingumlinganiswa owenziwe ngu-Arthur Conan Doyle owathi kule nkulungwane iphelileyo wadlula njenge icon yenkcubeko ethandwayo ngohlobo lwemovie yeDisney okanye blockbuster ekhokelwa ngabadlali uRobert Downey Jr. kunye noJuder Law. Nangona kunjalo, ukutyhilwa okukhulu kweza nenkulumbuso yochungechunge lweSherlock, apho uBenedict Cumberbatch njengoSherlock kunye noMartin Freeman njengoMnumzana Watson bavuselela intsomi ngokuyiguqula kwitekhnoloji yenkulungwane yama-XNUMX, yajika ukubheja kwe-BBC kwaba yimpumelelo.
Ingqaqa yothotho olusekwe kwiincwadi sele iqalile, ukuba yinyama yezinto zethelevishini zeemveliso ezinjengeNetflix okanye i-HBO efumene irhanisi labo elitsha elibeka amaqanda egolide kumagama.
Loluphi uthotho olusekwe ezincwadini oluthandayo?
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iincwadi » Olona luhlu lubalaseleyo lusekwe ezincwadini
Udliwanondlebe noMaría José Moreno, umbhali weTrilogy of Evil